China Ukutshintshela ubushushu obusikiweyo PU Flex Abavelisi rhoqo kunye nababoneleli |Alizarin
Ukugqithiswa kobushushu obusikiweyo PU Flex Rhoqo
Ikhowudi yeMveliso: CCF-Rhoqo
Igama leMveliso: UkuTshintshela ubushushu obunqamlekileyo PU Flex rhoqo
ezinye iinkcukacha ziyimfuneko.
Ukuhambelana kwe-Cutter: iiplani zokusika eziqhelekileyo, ezifana ne-Roland CAMM-1 GR-420, GS-24, STIKA SV-15, Mimaki CG-75/130/160FXII CG-60SRII/130SRII, Graphtec FC8600, CE6000,CE6000-F-F ,CE LITE-50,silhouette CAMEO,GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Expert II, AR-24, i-Craft njl.
I-Cuttable Heat Transfer PU Flex Regular iveliswa ngokwe-Oeko-Tex Standard Standard 100 standard, Ifilimu eguquguqukayo enefuthe elikhethekileyo kunye ne-adhesive yokutywina ukushisa.Kufanelekile ukutshintshela kwizinto ezilukiweyo ezifana nomqhaphu, imixube yepolyester/umqhaphu, irayon/spandex kunye nepolyester/acrylic njl.
Ukugqithiswa kobushushu obusikiweyo iPU Flex Rhoqo ingasetyenziselwa ukubhala kwiiT-shirts, ukunxiba kwezemidlalo kunye nokuzonwabisa, iingxowa zemidlalo kunye namanqaku okuthengisa.kwaye inokusikwa nazo zonke iiplani zangoku.Sicebisa ukusebenzisa imela ye-30 °.Emva kokhula, ifilimu ye-flexible cut idluliselwa ngoxinzelelo lobushushu.Sika itafile PU Flex Rhoqo kunye nefilimu yokukhulula i-polyester, yenza ukuba ibekwe kwakhona.
■ Lungiselela ilaphu elithandwayo ngemizobo enemibala emininzi.
■ Yenzelwe iziphumo ezicacileyo kumalaphu adityanisiweyo we-cotton/polyester amnyama okanye anombala okhanyayo
■ Ilungele ukwenza iT-shirts, iibhegi zeseyile, iifaskoti, iingxowa zezipho, iipadi zempuku, iifoto ezikwieqhiya njl.njl.
Ukuhanjiswa kobushushu obuguquguqukayo iPU Flex Rhoqo inokusikwa ngabo bonke abacwangcisi bokusika abaqhelekileyo abanje: Roland CAMM-1 GR/GS-24,STIKA SV-15/12/8 desktop, Mimaki 75FX/130FX series,CG-60SR/100SR/130SR ,Graphtec CE6000 njl.
5.Ukusika ukusetwa kwesicwangcisi
Kufuneka uhlale ulungelelanisa uxinzelelo lwemela, ukusika isantya ngokweminyaka yakho ye-blade kunye ne-Complicated
okanye ubungakanani bombhalo.
Qaphela: Le datha yobugcisa ingentla kunye neengcebiso zisekelwe kwizilingo, kodwa indawo yokusebenza yomthengi wethu,
ukungalawuleki, asiqinisekisi ukusebenza kwazo, Ngaphambi kokusetyenziswa, Nceda kuvavanyo olupheleleyo lokuqala.
■ Lungisa umphezulu ozinzile, okwaziyo ukumelana nobushushu olungele uku-ayina.
■ Tshisa intsimbi kwindawo ye< wool>, ubushushu obucetyiswayo be-ayina obuyi-165°C.
■ I-ayina ngokufutshane ilaphu ukuqinisekisa ukuba ligudileyo ngokupheleleyo, uze ubeke iphepha lokudlulisela kulo umfanekiso oshicilelweyo ujonge ezantsi.
■ Musa ukusebenzisa umsebenzi womphunga.
■ Qinisekisa ukuba ubushushu bugqithiselwa ngokulinganayo kwindawo yonke.
■ Ayina iphepha lokutshintshela, usebenzisa uxinzelelo kangangoko.
∎ Xa uhambisa i-ayini, kufuneka kunikwe uxinzelelo oluncinci.
■ Musa ukulibala iikona kunye neekona.
■ Qhubeka u-ayina ude ube uwalandele ngokupheleleyo amacala omfanekiso.Yonke le nkqubo kufuneka ithathe malunga nemizuzwana engama-60-70 kumfanekiso we-8"x 10" womphezulu.Landelisa ngoku-ayina wonke umfanekiso ngokukhawuleza, ukufudumeza lonke iphepha lokudlulisela kwakhona malunga nemizuzwana eyi-10-13.
■ Hlula iphepha elingasemva ukuqala ekoneni emva kwenkqubo yokuayina.
7.Ukuhanjiswa koxinzelelo lobushushu
■ Ukuseta umshini wokushisa ukushisa kwe-165 ° C kwi-15 ~ 25 imizuzwana usebenzisa uxinzelelo oluphakathi.umshicileli kufuneka uvalwe ngokuqinileyo.
■ Cofa ngokufutshane ilaphu elingu-165°C imizuzwana emi-5 ukuqinisekisa ukuba ligudileyo ngokupheleleyo.
■ Beka iphepha lokudlulisela kulo umfanekiso oprintiweyo ujonge ezantsi.
■ Cinezela umatshini 165 ° C imizuzwana 15 ~ 25.
■ Pelula ifilimu yangasemva ukuqala ekoneni.
Ngaphambili: UkuTshintshela Ubushushu obusikiweyo PU Flex Premium
Okulandelayo: Ukuhanjiswa kobushushu obunqanyuliweyo bePU Flex Effect
Ukuhanjiswa kobushushu obunqanyuliweyo bePU Flex Effect
UkuTshintshela Ubushushu obusikiweyo PU Flex Premium
Umhlambi wokuTshintshela ubushushu obusikiweyo